Roob mahiigaan ah oo siweyn ugada’ay deegaanka Xabaalbarbaare( OOflow) Ee Gobolka Bay. – idalenews.com
Roob mahiigaan ah oo siweyn ugada’ay deegaanka Xabaalbarbaare( OOflow) Ee Gobolka Bay.
Waxaa xaley ka da’ey degaanka xabaal barbaare iyo tuuloyinka hoostaga,roob ay ku diirsadeen dadka iyo duunyo, kaasoo sida dad ku sugan degaanka Xabaalbarbaare u sheegey Idale News Online in uu ahaa mid lama filaan ah isla markaana ay ku diirsadeen raxmada ALLE , oo dadka degaankaasi aad ugu oomanaayeen.
Waxaan degaanada dhulka ooflow ama Adable-weyne,xiligan kajiraa biyo la’aan bahsan,ayadoona ceelasha degaanaadasii ,iminka ay yihiin kuwo laga dayrinayo ama qaarba ay gureen.
Waxa dhacdo, sanad kasta xilligan oo kale ee Bisha maarso in ay yaraaadaan biyaha,islama arkaana ay go’aan ceelasha biyaha ay ka cabayeen dadka iyo xoolaha.
Waxaan degaaankaasi aaney ka jirin ceel matooro u soo saaro dadka biyaha macaan , inta badan 75% ceelasha degaanada ooflow ayaa ah mid kuwo biyahoodo qaraar ah, oo dadka ay ku adag atahy in ay cabaan. markii laga reeb, ceelka Ku yaaallo tuuladda Gaduudo-Dhunti, kaasoo xilli aad u mahquul yahay.
Ceelakan Biayahiisu macaaan ahi ee Ku yaala tuulada Gaduudo dhunti, ayaa waxay qodey dowladii Rayidka ahayd ee Soomaaliya , waaan ceel u baahan in dib loo qalabeeyo. 15 bishan marsoo ayaa mar uu kajabey matoorka, hase ahaatee,iminka sidii caadiga ahayd uu u shaqeynaya.
si kastaba ha ahaatee, roobkan xaley ka da’ey Degaanka xabaalbarbaare ayaa waxa uu ku soo beegmeya xilli biyo la’aan aad u daran ay ka jirto Guud ahaan degaanadda ooflow.
Idale News Online,Xabaalbarbaare.
Khasaaro badan oo ka dhashay qaraxyada ka dhacay Xaafadda Islii (Daawo Sawirada).
Barakacayaal ku dhiban Degmadda Markacaddey, Gobolka Shabeelaha Hoose